Kuvaleliswe othisha abayizingqweqwe | News24
Kuvaleliswe othisha abayizingqweqwe
ISITHOMBE:nokulunga ngobee UNkk Nelisiwe Mdlozini Nene noNkk Pauline Dladla abebevaleliswa eRussell Junior Primary ngeledlule.
OTHISHA ababili abebevaleliswa eRussell Primary ngoLwesihlanu emva kokuthatha umhlalaphansi bakhuthaze labo abangena emkhakheni wobuthisha ukuba bangabheki inzuzo kodwa babe nothando lomsebenzi.
Lezi zingqweqwe zothisha ezingo Nkk Nelisiwe Mdlozini-Nene no Nkk Pauline Dladla zikhale ngokuthi kunezinkinga eziningi ezikoleni ngoba othisha abaningi abasebasha abasangeni kulo mkhakha ngenxa yothando nesineke.
Bathe laba othisha abasha bangena ngenxa yokuthi babheke inzuzo.
UNene ubesefundise kulesi sikole iminyaka engu-38 kanti uDladla ubesefundise iminyaka engu-41. Ekhuluma nephephandaba i-Echo uNene uthe ufike kulesi sikole ngo-1977 ngaphansi kohulumeni wobandlululo kusanesakhiwo esisodwa, kodwa ngenxa yothando lo msebenzi wabekezela. Uthe yize esethatha umhlalaphansi uzobakhumbula kakhulu abafundi bakhe besigaba sesibili (Grade 2) nokubambisana okuhle abenabo nozakwabo.
Eyala abasafuna ukungena kulo mkhakha uthe: “Ayikho into edlula uthando lo msebenzi nokubekezela. Singene kulo mkhakha ngoba sinothando lo msebenzi singabhekile inzuzo, yingakho sikwazile ukubekezelela zonke izivunguvungu. Ukuba uthisha kudinga isineke nokubekezela njengoba kunomsebenzi omningi, odinga uhlale uzilunguselele.
“Kukho konke, kumele balalele labo abangaphambili kwabo ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili.”
UDladla uthe ufike kulesi sikole ngo-1971 kusenzima kakhulu njengoba kwakuhlanganiswa amakilasi, kepha ngenxa yothando lo msebenzi wabekezela kwaze kwafika isikhathi sokuthatha umhlalaphansi.
“Ukuba uthisha kungaphezulu kokuba umsebenzi ozowuholela zinyanga zonke. Kudinga uthando nokuzinikela njengoba usuke ufundisa izingane ezihlukahlukene, eziqhamuka ngaphansi kwezimo ezihlukene.
“Kumele ube umuntu okwazi ukubekezela njengoba minyaka yonke kuhlale kuba nezinguquko ohlelweni okufundwa ngalo. Kumele ube nothando lwezingane, nomsebenzi ngoba ngaphandle kwakho, akukho okulungayo,” kusho uDladla, ophinde waphonsa inselelo eMnyangweni wezeMfundo ukuba wehlise ekutheni othisha banikwe imiqingo yamaphepha, kodwa kugxilwe ekubhekelelweni nezidingo ezithinta abafundi ngqo.
Uthishanhloko wesikole uNks Thandiwe Mkhize uchaze labo thisha njengojikelele abebengena khaxa kuyo yonke imikhakha